Agaasimiha Guud ee Wasaarada Deegaanka JSL Oo Dhulka Jiidaya Sumcadii Wasiir Shukri Baandare oo Bilad Caalami ah Haysata | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Agaasimiha Guud ee Wasaarada Deegaanka JSL Oo Dhulka Jiidaya Sumcadii Wasiir Shukri Baandare oo Bilad Caalami ah Haysata
Beryayahanba sida laga warqabo haayada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaaga, hanti dhawrka guud iyo gudiga baarlamaanka u qaabilsanilaalinta hantida qaranku waxay ku afgo’een baadhista hanti lunsi badan oo ka dhacay Wasaarada Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miiga. Wasaaradan oo ay wasiir ka tahay wasiir heer caalami ah oo aqoon, waayo aragnimo iyo kartiba u leh wasaaradan ayaa waxa ceeb u soo jiiday agaasimaha guud Maxamed Cilmi (Huuno) oo ah nin aan aqoon iyo waayo aragnimo toona lahayn oo dhowaan uun ka yimi baadiye.
Siday wararku sheegayaan shaqaalaha haayadaha ilaalinta hantida qaranku waxay ku mashquuleen inay baadhaan wasaaradan oo agaasimaha guud ka lunsaday lacag aad u badan sifo badheedh ah. Cabashada shaqaalaha wasaarada deegaanka ayaa tiro beeshay iyagoo sheegaya in agaasimahu ka lunsanay lacago badan oo gunooyin ahaa mashaariic badana uu fadhiisiyey ka dib markay ka biyo diiden wax isbadamarinta qayaxan haayadihii ka caawin jiray. Waxay intaa ku dareen in uu ku jiro xaalad dhereg oo dhuumo ah taas oo u rabay inuu urursado lacago badan iyo hanti badan mudada ka hadhay xilka madaxweyne Siilaanyo kaas oo uu aaminsan yahay in madaxtooyadu ku difaaci doonto reer ahaan isagoo ilawsan sharciga dalka iyo in uu amaanada ILLAAHAY kula xisaabtimo doono kana go’an tahay naftiisa iyo ta ubadkkisa.
Siday sheegayaan shaqaalaha hayaadaha dawladu baadhitaanka ku socda Wasaarada Deegaanku waxay gonda dhigatay Maxamed Cilmi (Huuno) kaas oo isticmaalaya dhuumalaysi iyo in aanu kasoo xaadirin wasaarada si uu u meermeerayo shaqaalaha dabagalka ku haya hantida qaranka ee uu lunsaday.
Wararku waxay intaa ku darayaan in wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miiga oo daacad ahi ay u hamranayso agaasimahan guud oo ay is xigaan qoyska madaxtooyada. Sharaakiisha dawladu waxay sheegaayaan in Maxamed Cilmi (Huuno) oo dhulka Jiidayo sumcadii Wasiir Shukri Baandare oo bilad caalami ah haysata oo aan laga filayn in waxan oo kale ka dhacaan wasaaradeeda waayo waa marwo sharaf weyn huwan qarankana ku leh taariikh wanaagsan. Waxa lagula talinayaa Marwo Shukri Baandare in ay iska erido agaasimahan siduu isaga soo eryey wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka baddu ka dib markuu fartiisa dheeratay iyo gacan togaalayntiisa ka madan anshaxu.
Ayaan Maxamed Xassan
Weriye Madax banaan